R/wasaarayaashii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay Afganbi la sheegay in ay ku wadaan dowlada Soomaaliya. | warsugansomaliya.wordpress.com
Cali Maxamed Geedi iyo Cali Khaliif Galeyr oo labaduba R/wasaarayaal kasoo noqday dowladihii KMG ahaa ee dalka Soo maray ayaa waxa ay gaashaanka u daruureen in ay wadaan qorshe lagu af-genbinayo dowlada Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Xassan Sheekh Maxamuud.
“Kama shirin, Shaqsi Shaqsina isguma sheegin in la mucaarado dowlada Curdanka ah ee Soomaaliyeed ee sanadka aan jirin inkasta oo ay jiraan waxyaaba badan oo lagu dhaliili karo”, Cali Khaliif Galeyr oo xubin ka ah raga la eedeeyaay ayaa sidaa BBC-da u sheegay.
Cali Maxamed Geedi ayaa isna waxa uu yiri, “Sax waaye Kampala wa tagnay oo wali dana aan anugu gaar u leeyahay ayaan u tagnay, markii aan danaheena dhameysanayna waxaa nacasuumay oo aan la qadeynay Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekha Axmed kamana hadlin in wax lamucaarado. Waxyabaha ay baahinayaan saxaafaduna iyaga ayaa yaqaanno halka ay kasoo xigteen”.
Beeninta R/wasaarayaasha hore in ay maleegayaan dabinno lagu af-genbiyo dowlada Xassan Shekh Maxamuud ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo waayihii danbe saxaafadu hadal heysay in uu jiro isbaheysi ay sameynayaan inta badan raggi madaxda kasoo noqday dowladihii KMG ahaa si ay talada dalka ugala wareegaan dowlada hada jirta iyaga oo doonaya in marka hor ay dhigaan dibad baxyo waaweyn oo lamid ah kuwii Carabta gaar ahaan kii ugu danbeeyay ee Madaxweyne Mursi uu sabasaday.
Inkasta oo aan la’aaminsaneyn in ay leeyihiin awood ay wax ku af-genibi karaan oo taliska meleteriga Soomaaliya aysan ku laheyn xubna go’aan af-genbi qaada kara ayaa hadana waxaa wadada hada ay ku socdaan raga la eedeynayo waxa ay u muuqataa mid lamid ah tii ay mareen haraagii dowladii Maxamed Xusni Mubaarak oo sanad kadib dalka dib ula wareegay iyaga oo usoo maray meleteriga iyo taageera shisheeye.
← Maxaad kala socotaa sababta Rasmiga ah ay u dhamaan la’dahay QABYAALADDA Soomaalidda? (Warbixin Xiiso Badan)
Dhalinyaro ka tirsan kooxda fido walayaasha Al Shabaab iyo Hubkooda oo xalay lagu qabtay Degmada Deyniile (Daawo Sawirada) →